China 31″Mhete Yemoto Ine Inogadziriswa Grate vagadziri uye vatengesi | THYH
31” Mhete YEMOTO INE GRETE INOKANGANZA
Simudzira ruzivo rwako rwekunze nekusingaperi neTianhua Firepit, hupfu-yakafukidzwa 31 ”Mhete yeMoto ine Adjustable Grate. Iyo intuitive uye yakasarudzika dhizaini ichakurumidza kuzivikanwa nevanofarira kumisasa, asi iko kugadzirika kwegirati kunopa iyi mhete yemoto kumonyoroka kwakangwara. Basa repende rakasviba rinotarisa risingagumi, uye hupfu-hupfu huchadzivirira kutanga ngura uye kuputika - kuve nechokwadi kuti inoramba ichitaridzika zvakanaka kwemakore anouya. Iyo simbi yakagadzirwa yemhete yemoto iyi inenge isingagoneki, iyo inowedzera kukosha kwenguva refu kune hupenyu hwechigadzirwa. Kufanana nezvigadzirwa zvedu zvese, iyo 31”Moto Mhete ine Adjustable Grate inouya newaranti yegore rimwe. Isu tine 100% chivimbo chekuti simbi iyi, yakavharwa nepfuti yemoto mhete ichakufadza iwe paunosvika. Rambai mabiko achienderera mberi sezvo zuva ranyura uye gadzirirai kubika kuseri kwemba kwenyu ma<em>hangouts ne31” Mhete yedu yeMoto ine Adjustable Grate!
-Inogadziriswa grate inowedzera yakangwara twist kune yekare, isina nguva yekunze yekunze mhete yemoto
- Yakakwana yevabiki yekuseri kwemba, magrill emunharaunda, vanofarira kumisasa, uye zvimwe zvakawanda!
-Powder-yakavharwa pendi nhema inochengetedza kutaridzika kwakanaka uku ichidzivirira ngura uye kupuruzira.
-Kuvakwa kwesimbi kunogara kwenguva refu, kuchagara kwemakore anouya, uku uchichengeta kufamba uye kutakura
-Waranti yegore rimwe inouya yemahara nekutenga kwese
- Kudhayamita: 31 3/8”
- Kukora kwemiromo: 3/4”
- Kureba kwemhete yemoto: 9 "
- Kureba Kwese: 18"
- Moto Grate Urefu: 11 1/4” – 16 1/2”
Zvakapfuura: 42-MuHemisphere Moto Gomba
Zvinotevera: Yakanyanya Kushanda Moto Grate Uye Tafura
Mhete YEMOTO NEGARE INOKANGANZA